Ixabiso eliphantsi eliguqukayo le-Angle nkqo yecala elisecaleni leRabha yesichumisi seBelt yokuThengisa kunye neFektri | YiZheng
Yintoni iAngle enkulu ethe nkqo ecaleni kweBelt Conveyor esetyenziselwe yona?
Oku I-Angle enkulu Ukuthobela Ukuhanjiswa kweBelt ilunge kakhulu kuluhlu lwebhodi yeemveliso ezihamba simahla ekutyeni, ezolimo, amayeza, izithambiso, ishishini lamachiza, njengokutya okulula, ukutya okubandayo, imifuno, iziqhamo, i-confectionary, imichiza kunye nezinye iigranu.
Kwi Imveliso yesichumiso, I-Angle enkulu Ukuthobela Ukuhanjiswa kweBelt Ingasetyenziswa njengesixhobo sokuhambisa ukudibanisa iinkqubo ezahlukeneyo, zihlala zikhethwa phantsi komda wendawo kwindawo yokuvelisa, olu hlobo lokuhambisa lunobumbano lwendawo yokunyusa ukuphakama kunye namandla okuhamba.
Inkonzo eyenzelwe wena yeAngle enkulu ethe nkqo ecaleni kweBelt Conveyor
1) Nika inkonzo ye-OEM
2) iminyaka engama-20 yamava
3) Singayila kwaye senze ukuhambisa ngokusekwe kwimfuno yakho ekhethekileyo.
4) ukuthengiswa kwexabiso eliphantsi kwiindawo zokungcebeleka.
Iimpawu zeLayini eNkulu yeAngle ebanzi ecaleni kweBelt Conveyor
1. Ixabiso eliphantsi lokugcina.
2. Umthamo omkhulu wothutho, kwaye unokuthintela ukuchitheka kwezinto ngokufanelekileyo.
3. Ibhanti linokuququzelela ukutshintshwa ukusuka kwi-horizontal ukuya ekuhambiseni okuthe tye kunye nokuthambekela kokuhambisa okuthe tye.
4. Igcina indawo eninzi njengoko ivumela ukuhanjiswa kwezinto ezibonakalayo kwinqanaba le-0-90.
I-Angle enkulu yeVenkile esecaleni yeBelt yokuhambisa umboniso weVidiyo
Ukhetho lweModeli eNkulu yeAngle emi nkqo yeBelt
Inkqubo ye- I-Angle enkulu VUmrtical Sidewall Belt yokuhambisa zingahlulwahlulwa zibe zi-T, C kunye ne-TC ngokwamacandelo azo ahlukeneyo.
•Uhlobo lwe-T lulungele ukutyekela -40 °;
•Uhlobo C lufanelekile kwiimeko ezinobumanzi obulungileyo kutyekelo lwe β> 40 °;
•Uhlobo lwe-TC lulungele ukutyekela β> 40 °, kunye ne-viscosity enkulu yezixhobo.
Egqithileyo Ukuhanjiswa kweBelt yokuhambisa ephathekayo
Okulandelayo: Ilifti yebhakethi